Home » Creative Writing » မွမွဘုတ် စတဲ့ ရောဂါ – ငါးဖယ်သုပ်
နှင်းမွမွဟာလည်း ကိုကိုကျောက် ဥ ထားတဲ့ ငါးဖယ်ခြစ်တွေ ယူ သုတ် လို့ ကိုကိုကျောက် က ငို
ကေဇီ ဟာလည်း ဓာတ်ပုံလှလှတင်ချင်ဇော အားကြီးပြီး ငါးဖယ်တွေ ထသုတ် စသည်ဖြင့် ရောဂါတွေ တက်ကြတာပေါ့လေ။
အမှန်တော့ ဆလပ် ခင်းရင် ပိုလှတယ်။
ရှိတဲ့ ဂေါ်ဖီ ခင်း ရိုက်ပလိုက်တယ်။
ကြော်ပြီး ဂလို လာပြတော့ ကိုယ့် အမျိုးတွေ စိတ်က ခံနိုင်ရိုးလားးး
ဒါကတော့ မွမွဘုတ် ရဲ့ ငါးဖယ်သုပ် နည်းး နဲ့ ဓာတ်သေ
ဒါကတော့ ကိုကိုကျောက် နှမြောငို
နှင်း ရဲ့ ငါးဖယ်သုပ် ဓာတ်သေ
သံပုရာရည်သာ များများညှစ်ပြီး နှမ်းထောင်းလေးထည့်ပြီး သုပ်ပါဗျာ။
ဈေးကြီးတာရယ်.. အိမ်မှာ ငရုတ်ဆုံမဝယ်ရသေးတာရယ်ကြောင့် ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးပဲ သရေကျသွားပါကြောင်း..
Satsuma age is fried fish paste. Often, various kinds of chopped vegetables, or seafood are inside. They are ready to eat cold or grilled or used as one of the ingredients of oden and many other dishes.
ယိုးးဒယားးး နည်း ကလည်းးး
ငါးဖယ်က ငါးဘတ်ကို အရိုးများတယ်ပြောရသေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံသွားသတိရမိတယ်။
-အသုပ်မှန်သမျှကြိုက်တာတေကြာင့်လည်းကောင်းးးးးး ငါးဖယ်သုပ်ကို မျက်စေ့ဖြင့် အားရပါးရ စားသွားပါသည်။
ငါးထဲတော့ ငါးဖယ် ရယ် ငါးခူ ရယ်ကို အရမ်းကြိုက်တာ။
ငါးဖယ်က အဲလိုငါးပိဆီသတ်နဲ့ မသုတ်ဘူးဘူး
စားချင်စာ လှလှလေး ဟယ်။
လှလှလေး ဖြစ်ဖို့ ဥစားပေးထားလို့။
တဖက်ပိတ်မဲသွပ် သုပ်တာ မဆားချဉ်ပေါင်… သပ်ချဉ်သပ်ပိုက်..။
အဟိ… ငါးဖယ်ခြစ်အစိမ်း သယ်လာတာရှိသေးတယ်…
ဟင့်… မရနိုင်တာတွေ တမ်းတမိပြန်ပြီ…
အဟီး… ငါးဖယ်ခြစ်ကို အရသာနယ်ပြီးထောင်း…
လယ်ငါးခူ… ငါးကျည်းတွေပါသယ်လာသေး… ခွိ
ငါးဖယ်က ကြော်ပြီးသယ်လာရင် ကြာကြာမခံ…
အဲဒီ တဏှာတော့ စားရင်းသောက်ရင်း ဖြတ်ကြတာပေါ့ ကွီ
အိမ်မှာတော့ ငါးဖယ်အောင်းကို အကောင်မပျက် နာနာထုထောင်းပြီးချက်တယ်…
စားမယ်ဆို သံပုရာရည်ညှစ်… ကြက်သွန်ဖြူမီးကင်လေးနဲ့တွဲလိုက်… ရှလွတ်စ်
ငါးဖယ်ခြစ်ဈေးက တစ်ဆယ်သားတစ်ထောင် တစ်ခါတစ်ခါစားချင်ရင်တော့ ၀ယ်စားပစ်လိုက်တယ်။ ခုပုံကြည့်ရင် စားချင်လာပြီ။
ဒီမှာ အစိတ်သားထုတ် ကို ၇ ဒေါ်လှလောက် ပေးရတော့
ဗေ တားငဖယ် ချက်တတ် လုပ်တတ်ဝူး
အာ့ဆို ကျင့်သားရအောင် ငါးဖယ် ကြော် တစ်လ တစ်ကြိမ် စလုံး ကို ကြော်ပို့